Vaovao - Sodina Pne pressure Astm A106
ASTM A106 fantsona tsindry seamless (fantatra koa amin'ny hoe ASME SA106 fantsona) dia matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana solika sy solika fandrehitra, famokarana herinaratra, zavamaniry petrochemical, boiler, ary sambo izay tsy maintsy itateran'ny fantson-drano ny ranoka sy ny etona izay mampiseho mari-pana sy haavon'ny tsindry avo kokoa. .
ASTM A106 Pipe Pressure Seamless (fantatra ihany koa amin'ny hoe ASME SA106 fantsona) dia manarona fantsom-pandrefesana vy tsy mitongilana vita amin'ny vy ho an'ny serivisy avo lenta. Mety amin'ny fandohizana, ny fikolokoloana ary ny asa fananganana mitovy amin'izany.
ASTM A106 Kilasy B fantsona dia mitovy amin'ny ASTM A53 Kilasy B sy API 5L B amin'ny toerana simika sy ny toetra mekanika, amin'ny ankapobeny fampiasana vy karbaona sy hery yiled farafahakeliny 240 MPa, tanjaka mihombo 415 Mpa.
Ny fomba fitsapana ho an'ny ASTM A106 A, B, C dia ireo fitsapana manaparitaka, fitsapana hidrostatik, fanandramana herinaratra tsy mandeha amin'ny laoniny, fitsapana Ultrasonic, fitsapana amin'izao fotoana izao, fitsapana ny famoahana flux, ireo fomba fitsapana ireo dia tokony hampandrenesina na horesahina amin'ny mpanjifa mba hanamafisana izay karazana hapetraka ny fitsapana.
Ny elanelam-pivarotanay amidy:
Octalsupplied ASTM A106 Kilasy A, Kilasy B, fantsom-boaloboka vy tsy misy fangarony C toy ny etsy ambany:
Malagasy ASTM A106, serivisy Nour, Sour.
kilasy A, B, C
Range ny savaivony OD ivelany NPS 1/8 mirefy ka hatramin'ny NPS 20 mirefy, 10.13mm ka hatramin'ny 1219mm
Ny hatevin'ny rindrin'ny WT SEK 10, SEK 20, SEK STD, SEK 40, SEK 80, hatramin'ny SCH160, SCHXX; 1.24mm hatramin'ny 1 santimetatra, 25.4mm
Halavan'ny halava 20ft ka hatramin'ny 40ft, 5.8m ka hatramin'ny 13m, ny halavany tokana 16 ka hatramin'ny 22ft, 4.8 ka hatramin'ny 6.7m, halavany indroa indroa miaraka amin'ny 10.7m eo ho eo
Mifarana ny filaharana Farany farany, beveled, misy kofehy
Coating Hoso-doko mainty, varnished, epoxy coating, polyethylene coating, FBE ary 3PE, CRA Clad ary voahidy.